20 Final Cut Pro saamaynta X aad u. e
Final Cut Pro video tifaftirayaasha ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah hogaanka sii uruursanayey talooyinka video tifaftirayaasha laga heli karo suuqa. Waxa ay caan ah ayaa kor u kacay sannadihii la soo dhaafay oo ay la socdaan horumarinta daran ah. Tifaftirayaasha FCP waa isku dhaceen caan ku ah saamaynta, kala guurka iyo plugins kartoo waxay leeyihiin si ay u bixiyaan si ay dadka isticmaala ay. Maqaalkani waxa uu ku daatay doonaa nuurka qaar ka mid ah oo ku saabsan saamaynta ugu isticmaalay FCP oo iftiiminaya mid ku kor ay u isticmaalaan si ay u sameeyaan iyagoo wax soo saarka kaamil ah.
The Top 20 Saameynta.
1. Sepia Saamaynta.
Sepia waa mid ka mid ah saamaynta ugu caansan ee loo isticmaalo sawir iyo video tafatirka labadaba. Saamaynta waa saamayn fudud midabka kaas oo midabkeeda fudud brownish, midabka arkay in sawiro laga 19aad asalka iyo qarnigii 20aad, in warbaahinta aad rabtid in aad wax ka bedel.
2. saamayn Qaylada Add (ama) ayaa saamayn Film Midho.
Xusuusnow waayahaas, markii halkii TV dayax-gacmeedka aad lahaa TV cable ah halkii oo diiday in ay muujiyaan aad muujinaya maalin kasta oo soo bandhigay muuqaalka ah halkii ay wax aad looga xumaado ah badar cad madow guuxayaan oo dhan bandhigay ee telefishan aad? Taasi buuq. Oo haatan mid si videos ay dalban saamaynta aad kara. Waxyeelada buuq Add waa saamayn video ugu fiican sida saamayn ku meel gaar ah loo isticmaalo inay u boodboodaan ka mid clip in kale, iyada oo aan si dhab ah iyadoo la isticmaalayo saamaynta kala guurka ah. Cool eh?
Sample iyo YouTube link.
3. Faafreebaha Saamaynta.
Saamayn faaf, sidoo kale loo yaqaan saamayn isku dari kara / pixilation ah, waxaa loo isticmaalaa in qayb ahaan qarin wax ama qof ka clip ah oo aan la moodayay in ay shaaca ka qaaday in la. Tifaftirayaasha Video sidoo kale loo isticmaalaa arrinkan si ay u daboosho laama su'aal ama objectionable in dhaawacaya danaha daawadayaasha guud ahaan.
Sample iyo YouTube Link:
4. saamayn madow iyo caddaan.
Sida magaca waxa uu sheegayaa, saamaynta ahayn ma aha biyo firir ka mid ah codadka madow iyo caddaan uniform ku biireen in wada noolaanshaha la video hoostiisa ku edit. Xaqiiqadii tani, qaybaha ka daran midab yihiin yaraaday madow iyo qeybo ka mid ifaya yihiin yaraaday inay boor ama cad xidhan xoojinta.
5. Saamaynta fiidiyo.
Ever daawaday Waxqabadka Paranormal ah? Haddii ay haa tahay, ka dibna aad u yaqaanaan xaqiiqada ah in video la gebi toogtay handycam ah, oo muujinaysa joogta ah taariikhda-time, dhibic cas bilig tuso duubo socda, u furan dhererka cad laydi xuduud iyo video ahaa caddeyn ah waxaa ka mid ah . Laakiin xaqiiqadu, in kaliya ay ahayd saamayn codsatay in ay filim oo dhan. Saamayn fiidiyo wuxuu kuu ogol yahay Tifaftiraha looga hortagayo oo dhan lagama maarmaanka ah ee video clip ah si ay u eg waxa uu si cad diiwaan handycam ah.
6. Waxyeelada Cold Steel.
Waxyeelada steel qabow badan yahay ee cado blackish-buluug nixiyay oo aad ku doonaysid in lagu daro in aad video clips. Saamayn Tani waa caan videos in ay yihiin dareen xooggan oo farriin ah oo qoto dheer moral si loo bixiyo. Colors waa hababka ugu wanaagsan ee ay u muujiyaan shucuurta iyo niyad, saamaynta ay tani ku nool waxay ku.
7. birbirqaya Saamaynta.
Keenida dilaaca iftiinka dhalaalaya waxaa quruxsan fudud la Final Cut Pro X. kuwa aan aqoon u saamayn biligleynaya (ama) saameyn Montage, waa ka badan ama ka saameyn kala guurka yar loo isticmaalo halka laga soo gudbo hal jir midka kale kula biligleynaya fudud xilli yar oo ka mid ah wakhtiga. Si kajan ah in aad hesho marka aad guurto gashto ee camera aad ka weyn tahay shumac. Taasi saameyn birbirqaya dabiiciga ah.
8. Mirror Saamaynta.
Sida fudud sida magaca waa, saamayn Mirror ee FCPX kuu ogolaanaya in aad muraayad aad video. Samee xaq u tagay tago oo xaq soo tagay. Saamayn Tani waa wanaagsan marka loo isticmaalo la laama kaamil ah. Clips oo dhan ee ka mid ah ayaa video Aan soo jiidaan saameyn karaan Mirror.
9. Saamaynta Dhulgariirka.
Maxaa dhacaya marka dhulgariir lama filaan ah ay dhacdo? Dhulku wuxuu ruxruxaa iyo weliba naga sii gilgil oo ay la socdaan Goosebumps ah waxa ay ina siinaysaa in geeddi-socodka. Mid ka mid ah ka codsan kartaa saamaynta ay Cabsato la mid ah oo ay wax soo saarka aad u gaarka ah ee kala duwan cabirkiisu iyo waqti dheer loo eegin ay ku celcelinina ee saamaynta iyadoo la kaashanayo ku Pro Final Cut
10. guridda Saamaynta.
Saamaynta guridda ka duwan kuwa kale ma saamayn midabka nooga waran. Waa isku darka dhowr midabo tayada fiican u milmay bixinaya aragti dheeraad ah oo ku jihaysan in ay content ee video clip ah. Waxa si fudud ay xoojinaysaa tayada video ah.
11. Wajigooda saamayn.
Waxyeelada Wajigooda waa sidaas oo kale saamayn Mirror wada hadleen horaantii hore. Farqiga kaliya ee isagoo, waxa kor u hoos yimaado iyo waxa hoos kor u kaco, in uu yahay, clip ah oo shiiqda laftiisa ama lafteeda jirsado by xagal 180 digrii.
12. Saamaynta la barbardhigo Crisp.
Inta badan sii adkaaneyso isu dheelli xaq u dhexeeya midabka iyo luminance ah clips gaar ah waa shaqo daalin. Laakiin iyadoo la kaashanayo Final Cut Pro X, hal gaari karo saamiga la barbardhigo fiican ee isaga ama iyada wax soo saarka iyadoo la kaashanayo filter ka tegayo duwan la heli karo.
13. Photo Xusuuso saamaynta.
Ever sadaalinayo sanamyada daabacay camera Polaroid ah? Helitaanka ku tukado cad Polaroid agagaarka SNAP ku riixi oo laga duubay video waa mid ka mid ah saamaynta ay dadka ugu jecel yahay oo ah waqtiga oo dhan. Nasiib wanaag, Final Cut Pro X saamayn dhan, waayo, sida saamaynta Photo Xasuustaan ​​magacaabay.
14. yaabtid saamayn.
Saamayn, maragna gashay waa mid ka mid ah saamaynta fanciest heli karaa Final Cut Pro X. Marka mid dareemaan baahida loo qabo in ay wax soo saarka jazzing ilaa iyo weeraray diirada uu ku yaal, waxa ka wanaagsan in la gaaro waxaa kale oo aan ahayn iyadoo la isticmaalayo saamaynta la yaabtid ah. Isticmaalka arrinkan aad u ogolaanaya in ay razzle-yaabtid qaybo la soo xulay oo ka mid ah clips video. Shuqullo Great ayaa sidoo kale abuuray iyadoo la isticmaalayo saamaynta this.
15. Cross Hatch Saamaynta.
Waxyeelada dillaacaan cross ku salaysan yahay ukumaha fanaaniinta farsamo isticmaali halka qalin Vivtoria ay sawir. FCPX kuu ogolaanaya in aad soo saameyn la mid ah live aad video clips iyo jaraa, iyadoo fursadaha kala duwan ah u bedelo saamaynta sidoo. Waa in la ogaadaa in Waxyeelada Cross Hatch waa saamayn degdeg ah geeddi-socodka iyo sameeya wax yar oo waqti la moodo.
16. Old Film Reel saamayn.
In maalmood ah oo dahab ah, halkaas oo wax walba ma muuqdaan dahab, filimada horumariyo daran ah oo dheeraad ah hurdi halkii midabo sariirtaada caadiga ah. Filimada ayaa kuwa random khadadka taagan iyo marka muuqday la badar ganaax. Tani waxay saamayn ku tilmaamay waxaa loo yaqaan saamayn ku ambadeen wax film jirka ee la heli karo ee Pro Final gooyay X.
17. Vignette Saamaynta.
Mid ka mid ah saamaynta xarrago leh ku sugan pro cut final X, saamayn vignette marka loo isticmaalaa in lagu saxaa looxyada video ah, waxay noqonaysaa inay qasayo geesood oo jir iyo barbaro diiradda xarunta ku yiilleen. Waxaa loo adeegsaday ugu fiican si loo muujiyo wax muhiim ah in clip ah.
18. Kaleidoscopeka saamayn.
Kaleidoscopeka A ayaa mar walba awood in ay soo saaraan naqshadaha u muuqda cad in koonfur iyo yaabiyo indhahayaga. Saamaynta aad iyo dareen iman kara lagu gaadhi karaa Final Cut Pro X ee Kaleidoscopeka Saamaynta. Si fudud u doortay jir aad rabto saamaynta in ay ka shaqeeyaan iyo arko jir aad Seme foomamka saddex xagal ah oo kala duwan.
19. Fisheye Saamaynta.
Kalluun hantiyi indhaha arrin symmetrical iyo unseeingly qurux badan. Ciddi leh ee geeska iyo ballaaran dhexe. Dhammaan software ugu dambeeyay video tafatirka ee hantiyi saamayn sida Saamaynta Fisheye la odhan jiray. Cut Final pro X aan ka yarayn yahay. Qof kasta oo ka arki kartaa sida ay u egtahay in ay kalluun indhaha magacaabay iyadoo la kaashanayo FCPX.
20. uu yahey Saamaynta.
Inta badan, dadka ku qaldo saamayn siyasad in ay xoogaa la mid ah in ay saamayn birbirqaya finalka cut pro X, laakiin xaqiiqdu ay gabi ahaanba ka duwan tahay. Halkee biligleynaya waxaa lagu sameeyaa jir oo dhan video ah, uu yahey waxaa lagu sameeyaa oo keliya ka qayb gaar ah ee jir oo dhan video ah.
Goobaha ka mid ka heli kartaa saamaynta FCPX cusub.
FCPeffects leedahay noocyo kala duwan oo saamayn u bixiyaan. Waxay ka kooban tahay oo dhan saamaynta trending ugu dambeeyay ee suuqa oo ay la yimaadaan oo tayo fiican leh. Saamaynta waa dhexdhexaad ah jaban oo halkan la awoodi karo.
Pixel Film Studios waa suuq online bandhigaya oo dhan biilasha la xiriira Final Goo ka bilaabanayo X. Pro ka saameynta, kala guurka, qalab saamaynta, qoraalka iyo mawduucyada, istuudiyaha film pixel leeyihiin tiro badan oo kaliya wax walba oo ku saabsan. Goobta waa in yar oo ah mid qaali ah, laakiin arkaya helitaanka waxyaabaha u leeyahay in ay bixiyaan, waxaa gebi ahaanba ku kacaya qiimaha.
Adobe Ciyaar VS Final Cut Pro, kuwaas oo mid ka mid khayr idiin ah?
> Resource > FCP > 20 Final Cut Pro saamaynta X aad u.